Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Madoobe oo ka hadlay fariisimaha ay ka baxayaan Ciidanka Kenya – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Madoobe oo ka hadlay fariisimaha ay ka baxayaan Ciidanka Kenya
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), ayaa ka hadlay fariisimaha ay ka baxayaan Ciidanka Militariga Kenya, ee qaybta ka ah Xoogaga Nabad Ilaalinta Midowga Afrika.
“Arrinta Ciidamada baxaya, waxaan arkayaa in walaahoo badaniyo KDF xagee u baxday? Buulo Gaduud baa laga baxay iyo xagaa laga baxay. Diyaargarow baa jira hawlgal loo diyaargaroobayo.” Ayuu yiri Madaxweynaha Jubbaland oo Jimcihii Saxaafadda kula hadlay Magaalada Kismaayo.
“Taa macnaheedu waxaa weeyaan in lees fudeediyo, dhufeysyadii badnaa ee sanadahan lagu jiray in laga baxo, hubka wixii culusi ee aan loo baahnayn in furimo la gaynaayo dib loo soo celiyo. Ciidan hawlgal buundooyinka lagu xoreynaayo qaadaya barnaamijkaasaa la billaabayaa waqtiga ugu dhaqsaha badan. Taasaa keentay marka in Ciidamada iyo culeyska iyo waxa meelaha yaala faraha badnaa la geeyay in la soo baneeyo.” Ayuu yiri Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam.
“Badhaadhana waa laga soo hawlgeliyoo, iyada, Kudhaa iyo Buulo Xaaji waala isku xiri. Tanna buundooyinkaa la qabanayaa. Inay hadal noqoto iyo in kalana waqti dhowaa is weydiin doonnaa, aad baad u mahadsan tihiin.” Ayuu yiri Axmed Madoobe.
Madaxweynaha Jubbaland, ayaan soo hadalqaadin diyaaradaha dagaalka Kenya oo dad rayid ah ku bartilmaameydsanaaya Degmada Ceelcadde iyo tuulooyinka kale ee hoos-tagga ee Gobolka Gedo.
Tan iyo markii Xoogaga Ururka Al Shabaab ay 15-kii bishan weerareen xeradii Ciidanka Kenya ku lahaayeen Degmadaasi Ceelcadde, ayay diyaaradaha Kenya billaabeen inay garaacaan goobaha uu rayidku ku badan yahay.
Maxkamad ku taallo dalka Mareykanka ayaa xukun ku riday nin Somali ah oo qirtay inuu al-shabaab taageero siiyey
Madaxweyne Xasan Sheekh oo gaaray Magaalada Addis Ababa (SAWIRRO)
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Qarax ka dhacay degaanka Qalimow ee Gobolka Shabeellaha dhexe, waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac sida ay ku warramayaan wararka aynu halkaasi ka helayno.
Qaraxa oo ahaa mid xooggan ayaaa ka dhacay maqaayad lagu shaaho oo ku taalla degaanka Qalimow, waxaana la sheegay in Qaraxaasi uu ahaa miino dhulka lagu aasay oo goobta ku diyaarsanayd.
Wararka ayaa tibaaxaya in Qaraxaasi ay ku dhinteen seddex ruux, waxaana dhaawacyo kala duwan ay kasoo gareen in ka badan tobon ruux, kuwaaasi oo haatan xaaladdooda caafimaad lala tacaalyo.
Dad waxyeeladu soo gaartay ayaa isugu jira Askar iyo dad shacab ah, oo goobta ku sugnaa, markii qaraxu dhacayay, waxaana maqaayadda la qarxiyay ay ahayd mid inta badan ay imaan jireen Askarta Ciidanka Dowladda.
Wali maamulka degaanka iyo Saraakiisha amnigu kama hadlin Qaraxaasi, sidoo kale ma jirto faah faahin intaa ka dheeri ah oo laga helay Qaraxaasi miino ee khasaaraha kala duwan dhaliyay.
Maxkamada ciidamada qalabka sida qeybta 21aad ee Galmudug ayaa maanta u fariisatey dhageeysiga iyo go’aan ka gaarista dacwadda loo heysto dable Xoogga, Cabdiraxmaan Cabdulahi Axmed Tooxoow ( Taagane) oo ka tirsan guutada 18-aad ururka 6-aad ee Gor Gor, kuna eedeeysan dil xerada ciidamda GorGor ee duleedka Dhuusamareeb loogu geystay 16-kii bishii 12-aad ee sanadkii tagey, allaha u naxariistee Marxuum ex-dable xoogga Nuuradiin deeq Maxamed oo isla xeradaasi ka tirsanaa.
Guddoomiyaha maxamada ciidamada qalabka sida ee Qaybta Galmudug G/dhaxe Cabdulaahi Abuukar xasan ayaa soo xiray gunaanadka garmaqalka dacwada, waxa uu ku dhawaaqey xukunka maxkamada oo go’aamisey in Dable xoogga dalka, Cabdiraxmaan Cabdulahi Maxamed Tooxoow ( Taagane) yahay dambiile geystay dilka, laguna xukumey 15-sano oo xabsi ciidan ah iyo boqol halaad oo ah magta marxuumka uu dilay.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa Maxkamada ciidamada qalabka sida qeybta 21aad ee Galmudug waxaa la horkeenayay askar ku eedeysan dambiyo kala duwan Oo ay galeen askartaasi.
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Somalia Cabdisaciid Muuse Cali, ayaa Muqdisho ku qaabilay wafdi ka socday Wasaaradda Yurub iyo Arrimaha Dibadda ee Jamhuuriyadda Faransiiska, kaas oo uu hoggaaminayey Agaasimaha Afrika ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mudane Christophe Bigot.
Wasiirka iyo Wafdiga ayaa ka wada hadlay horumarinta xiriirka labo geesoodka ah iyo xoojinta iskaashiga wadar geesoodka ah ee labada dal, waxaana ay si gaar ah kulankooda diiradda ugu saareen iskaashiga dhinacyada amniga, diblomaasiyadda, la dagaallanka argagixisada iyo arrimaha Gobolka Geeska Afrika.
Wararka8 hours ago